အေ မ့ သေတ္တာ ထဲ က စာရွက်အစုတ်လေး တွေ့ လို့ ဖြန့်ကြည့်တဲ့ေ န့ – Shwewiki.com
အမေ ရေ ဒီ ဖိတ်စာက အမေ စုတ်ဖြဲထားတာမို့လား ဆိုတော့ စုတ်ပေါင်တော်တဲ့ ကြေမွပီး ဆုတ်ပြဲနေတဲ့ ဖိတ်စာလေးကို ပြန်ဆက်ကြည့်ရင်း ဒီဖိတ်စာလေး ကိုင်ပြီး စက်ဘီးလေး တစီးနဲ့ လိုက်ဖိတ် နေတဲ့ အသက်၁၇ နှစ် စပ်စလူးမလေး ကိုပြန်မြင်လာမိတယ်…
အဲ့ ဒါ အမေပေါ့…. မှုန်နေအောင် လှတဲ့ အမေဟာ မြို့မှာ အလှလဲ နာမည်ကြီး ကျောင်းမှာ အကလဲ နာမည်ကြီး….. ဆရာဝန်တွေ အရာရှိ အရာခံတွေ အပါဝင် ကာလသားတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည် ချစ်ခင် တောင်းရမ်းကြပေမယ့် အဖိုးဟာ သူ့သမီး ပေါက်စနကို ဘယ်သူနဲ့မှ သဘောမတူခဲ့ တူတန် တန်တယ် မထင်ခဲ့… အနုပညာနဲ့ အလှ​​ပြင်ဖို့သာ တော်တဲ့ အမေဟာ စာဘက်မှာ ဝါသနာရော ပါရမီပါ မပါခဲ့. ၁၀တန်း အရောက်မှာပဲ…. အဖေနဲ့ ခိုးရာ လိုက်ပြေးခဲ့လေပြီ………။
(၁) ညီကိုလေး ၂ယောက်ရှိတဲ့ အဖေ့ဘက်အသိုင်းဝိုင်းမှာ ဆွေမျိုး တသိုက်လုံး ဖိတ်စာထဲ ထည့်ရိုက်ခဲ့ပေမယ့် မောင်နှမ ၈ယောက်နဲ့ အမေ့ဘက်နေရာလေးကတော့ တိုတိုနဲ့ရှင်းရှင်းသာ အဒေါ်တယောက်ကတော့ အမေ့ မင်္ဂလာဆောင်နေ့ကို ဖွဲ့နွဲ့ ပြီး ဒီလိုပြောဘူးသည်.. ဆံပင်တိုလေးနဲ့ စက်ဘီးတစီးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်က ကျွေးတဲ့ ကိတ်တေ လက်ဖက်ရည်တေယူပြီး အိမ်ထဲ တဟီဟီဝင်လာတာပေါ့အေ ဘယ်သူကမှ စောက်ဂရုမစိုက်တာကို အဲ့လို မျက်နာပြောင်တယ်တဲ့. ….
အသက်၁၇ နှစ်အမေဟာ မိဘ မပါ မောင်နှမ သားခြင်းမလာ နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကို အဖေ့လက်ကို ဆွဲ ပြီး ကျင်းပခဲ့တယ်…
အ​ဒေါ်တွေ သတ်မှတ်သလို မျက်နှာ ပြောင်လို့လား ဝမ်းနည်းရက်နဲ့လား တော့ အမေသာ သိပါလိမ့်မည်.. အမေရယ် အဲ့ဒီအချိန် က တကယ် ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတေ ယူခဲ့ရမှာ လို့အားမလိုအားမရ ပြောမိရင် ဟဲ့ အဲ့အချိန်က ညီးအဖေက ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ ပဲတဲ့
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည် အဖေတို့ညီကိုဟာ အသားရေက ဖွေးရုံမက စိမ်းပါနေသေးသည်တဲ့. .. မျက်ခုံးတေက ထူပိန်းနေကာ မျက်လုံးတွေ လှသည် ညီကို ၂ယောက် လုံးက ပြောင်းလာကာစကဆို ဒီမြို့သူတွေ အဲ့အိမ်ရှေ့ တဝဲဝဲ ပေါ့အေတဲ့ ပတ်ဆံကလဲရှိတော့ ငွေတော့ သုံးတာပေါ့တဲ့…. ငွေကိုသုံးရုံတင်မကပဲ ဖြုန်းပါဖြုန်းတာတွေ ဘာတွေ အဲ့ဒီအရွယ်လေးနဲ့ အမေသုံးသပ်တက်ပုံမရ အမေ ရူးသွပ်တဲ့ ကခြင်း အနုပညာ ကိုလဲ အဖေ့ရဲ့ သဝန်တိုမူ့ အောက်မှာ စုံးစုံးမြုပ် ပျောက် ကွယ်သွားရတော့သည်…
ကိုယ် သိတက်စအရွယ်ရောက်တော့ အမေနဲ့အဖေ ဆိုတာ တခါတရံသာ တွေ့ရတဲ့ ဧည့်သည် တွေ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ….
တခါတလေ တော့ အမေတို့က မန်းလေးမှာ နေကြတာလို့ ကြားပြီး တခါတလေတော့ ပြင်အူးလွင် မှာ နေကြတာလို့ ကြားဘူးသည် အမေတို့ လာလည်မာ ဆိုတဲ့အခါ လဲ ကိုယ်ဟာ ထင်သလောက် မပျော်
နင်တို့ကို နင့်အဖေတို့နဲ့ ထည့်လိုက်တော့မယ် လို့ အဒေါ်တေ ခြိမ်းခြောက်ရင် ဘာမှန်းမသိပဲ ကြောက် ခဲ့ရသည်… ကြည့်စမ်း သူ့အဖေနဲ့ တူလာတယ်တော့ လို့ အဒေါ်တေစရင် ကိုယ်တို့ မောင်နှမ တွေ အဒေါ်တေ စိတ်တိုင်းကျ စိတ်ဆိုးပြကြရတာပါပဲ… ။
အဖေက အမေ့အိမ်ကို နောက်ဆုံးချိန်ထိ ဝင်ထွက် ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး…. ယောကျာ်းနဲ့ အမတေ အကိုတေ ကြားလဲ အမေဟာ အမြဲလို စေ့စပ်ရင်း ဗျာများနေခဲ့ရပါတယ်…
အဖေ နဲ့ ပြသနာတက်ရင် အမတွေ အကိုတွေ ကြည်ကြည်မကြည်ကြည် ပြန်လာတက်ပီး အဖေလာခေါ်ရင် ဘသူတားတား ပေါ်တင်တမျိုး ခိုးပြီးတမျိုး ပြန်လိုက် သွားတက်သည်… အဖေ က သွေးဆိုးသည်… အရက်သောက်ပြီး တကိုယ်ကောင်းဆန်တက်သည်..
အလွန်သိတက်တဲ့ အရွယ်ရောက်လာတော့ ကိုယ်ဟာ အဖေ့ကို မတွေ့ချင်တော့ တကယ်တော့ အဖေက ကိုယ့်အထင် အဆိုးကြီးထဲမပါပါ အရက်သောက်ပြီး အမေ့ကို အော်ဟစ်ဆဲဆိုတက် ပေမယ့်… ကိုယ့်ကို အကြီးဆုံးသမီး အနေဝေးတဲ့သမီးမို့လား မသိ တခါလေးမှ လေသံမာမာနဲ့ မပြော လက်နဲ့မရွယ်ခဲ့ပါ…
အဖေဟာ အလုပ်တော့ တကယ်လုပ်ပေမယ့် မမြဲ စိတ်ဆတ်လွန်းတာမို့ အလုပ်တိုင်းမှာ ပြသနာတက်ကာ ထွက်လာရတာကများသည် အဖေ အလုပ်ပြောင်းတိုင်း အဖေသွားလေရာ အမေဟာ ဖဝါးထပ်မျှပါစမြဲ တိုက်ခန်းရရ တဲစုတ်နေနေ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ပြုစုသည် ပွဲလမ်းသဘင်မှာ အဖေအော်ဟစ် ဆဲဆိုနေလဲ အမေဟာ အဖေ့ဘေးမှာ အဖေ ဘယ်သူနဲ့ရန်ဖြစ်လို့ အဖေမှားမှား မှန်မှန် အမေဟာ အဖေ့ဘေးမှာ အမေဟာ အဖေ့ကို ကိုယ်တို့ အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ထိ ကိုကို ဟုသာ ခေါ်သည်…။
(၂) ဘုရားစင် ရှေ့မှာ အဖေနဲ့ မတွေ့ပါရစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းဘူးပေမယ့် အဖေလာ ရင် တမင်ပြုံးကာ ဖေ့ ဖေ့နဲ့ တီတာ တက်ဲတဲ့ ကိုယ် ဟာ တနေ့မှာ…
ရော့ ငါ့သမီးတွက် တဲ့ ထမင်း ပန်းကန်ထဲရောက်လဲာတဲ့ ဟင်းတုံးကို ဖက်ခနဲ ဖယ်ပစ်ရင်း စားပွဲကထ ထွက်လာ တာက အဖေ့ အပေါ် ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး ဆန့်ကျင် ရိုင်းစိုင်းဘူးခဲ့ခြင်းသာ……
အဖေဟာ တာဝန်မသိမူ့ တကိုယ်ကောင်းဆန်မူ့ အပြင် ကိုယ်တို့ မိသားစုအပေါ် လုံးလုံးခွင့်လွတ်လို့မရတဲ့ အမှား တခုကို လုပ်ခဲ့လေပြီ…… အငယ်နှောင်း ဆီ အဖေ ရောက်နေချိန် တရွာထဲနေ အမေဟာ အငယ်ဆုံး ၂နှစ်သားလေးကို ဖက်ကာ ငိုရင်း အိပ်နေခဲ့တယ်….. ဒါလဲ အမေဟာ ခွင့်လွတ်နိုင်ဆဲ အမေ သူနဲ့ကွာမလား သမီးတို့နဲ့ ပြတ်မလား လို့ ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုနာကျင်မူ့နဲ့ မေးခဲ့မိလဲမသိ ကိုယ့်မေးခွန်းကြောင့် ပဲ လား အဖေ့ကို နာကျည်း လွန်းသွားလို့လား ဒါမှ မဟုတ် ဝဋ်ကြွေးပဲ ကြေခဲ့လေပီလား မသိ ခုတော့ အဖေ့ဆီက အမေလွတ်မြောက်လာတာ ၁၅နှစ် ကျော်ခဲ့ပါပြီ….။
(၃) ဝါသနာပါရာကို ငယ်နုစဉ်က စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး အသက် ၅၀ ကျော်မှ စတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အမေက ကဖို့ ဆိုခါးနာတာလဲ မသိ ပင်ပန်းတာလဲမသိ အကနည်းပြ အဖြစ် သွက်လက် နေခဲ့သည်..။ တော်လွန်းတဲ့ အမေ့ပါရမီကို နှမျောတသ စွာ ဖြစ်မိပေမယ့် အမေကတော့ သူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ နှစ် ပေါင်း ၃၀ကျော်ကို နောင်တသံနဲ့ ဘယ်သောအခါမှ မပြောခဲ့ပါဘူး တခါတရံ လေသင့်လို့ အဖေ့ကြောင်းတွေကြားရတဲ့အခါ အမေဟာ ခပ်ဆိတ်ဆိတ်သာ နေတယ် နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ ကလေးနဲ့ လို့ကြားလဲ အမေဟာ မသိလိုက်မသိဘာသာ….
သေပီတဲ့ လို့ ကြားလဲ အမေဟာ မကြား သယောင်ယောင် …..
တရက်ကတော့ မျက်မှန်တဝင့်ဝင့်နဲ့ ကိုယ် fb သုံးနေရာသို့ ရောက်လာသည်…..။
Fb မှာ နင့်အ​ဖေကို ရှာကြည့် လို့ရသလား တဲ့ ကိုယ် မျက်စောင်းခဲ မှ ဟိုလိုလိုဒီလိုလို လျောချ သွားတဲ့ အမေဟာ အဖေ့ကို လွမ်းနေမယ်လို့ မတွေးမိခဲ့ပါ….
ဒီဖိတ်စာ လေးကို အမေဟာ အဖေကို အပြီးစွန့်လွှတ် တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်စဉ်က စုတ်ဖြဲခဲ့သလား… အဖေ နောက်အိမ်ထောင် ကျသွားပီးကလေးတောင် ရနေပီ လို့ကြားစဉ်ကစုတ်ဖြဲ ခဲ့လေသလား…
ဖိတ်စာအစုတ်လေးကို ပြန်သိမ်းထားတဲ့ အမေဖို့ကရော ပျက်စီးယိုင်နဲ့ခဲ့တဲ့ဘဝတခုရဲ့အမှတ်တရ အဖြစ်လား ယောကျာ်းအပေါ် လွမ်းတဲ့ အလွမ်းတွေအဖြစ်လား တသက်မှာ တခါပဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချစ်အတွက်လားတော့ အမေပဲ သိပါလိမ့်မည်……… ။
အမေ ရေ ဒီ ဖိတျစာက အမေ စုတျဖွဲထားတာမို့လား ဆိုတော့ စုတျပေါငျတျောတဲ့ ကွမှေပီး ဆုတျပွဲနတေဲ့ ဖိတျစာလေးကို ပွနျဆကျကွညျ့ရငျး ဒီဖိတျစာလေး ကိုငျပွီး စကျဘီးလေး တစီးနဲ့ လိုကျဖိတျ နတေဲ့ အသကျ၁၇ နှဈ စပျစလူးမလေး ကိုပွနျမွငျလာမိတယျ…
အဲ့ ဒါ အမပေေါ့…. မှုနျနအေောငျ လှတဲ့ အမဟော မွို့မှာ အလှလဲ နာမညျကွီး ကြောငျးမှာ အကလဲ နာမညျကွီး….. ဆရာဝနျတှေ အရာရှိ အရာခံတှေ အပါဝငျ ကာလသားတှေ ဝိုငျးဝိုငျးလညျ ခဈြခငျ တောငျးရမျးကွပမေယျ့ အဖိုးဟာ သူ့သမီး ပေါကျစနကို ဘယျသူနဲ့မှ သဘောမတူခဲ့ တူတနျ တနျတယျ မထငျခဲ့… အနုပညာနဲ့ အလှ​​ပွငျဖို့သာ တျောတဲ့ အမဟော စာဘကျမှာ ဝါသနာရော ပါရမီပါ မပါခဲ့. ၁ဝတနျး အရောကျမှာပဲ…. အဖနေဲ့ ခိုးရာ လိုကျပွေးခဲ့လပွေီ………။
(၁) ညီကိုလေး ၂ယောကျရှိတဲ့ အဖဘေ့ကျအသိုငျးဝိုငျးမှာ ဆှမြေိုး တသိုကျလုံး ဖိတျစာထဲ ထညျ့ရိုကျခဲ့ပမေယျ့ မောငျနှမ ၈ယောကျနဲ့ အမဘေ့ကျနရောလေးကတော့ တိုတိုနဲ့ရှငျးရှငျးသာ အဒျေါတယောကျကတော့ အမေ့ မင်ျဂလာဆောငျနကေို့ ဖှဲ့နှဲ့ ပွီး ဒီလိုပွောဘူးသညျ.. ဆံပငျတိုလေးနဲ့ စကျဘီးတစီးနဲ့ မင်ျဂလာဆောငျက ကြှေးတဲ့ ကိတျတေ လကျဖကျရညျတယေူပွီး အိမျထဲ တဟီဟီဝငျလာတာပေါ့အေ ဘယျသူကမှ စောကျဂရုမစိုကျတာကို အဲ့လို မကျြနာပွောငျတယျတဲ့. ….
အသကျ၁၇ နှဈအမဟော မိဘ မပါ မောငျနှမ သားခွငျးမလာ နဲ့ မင်ျဂလာဆောငျကို အဖလေ့ကျကို ဆှဲ ပွီး ကငျြးပခဲ့တယျ…
အ​ဒေျေါတှေ သတျမှတျသလို မကျြနှာ ပွောငျလို့လား ဝမျးနညျးရကျနဲ့လား တော့ အမသော သိပါလိမျ့မညျ.. အမရေယျ အဲ့ဒီအခြိနျ က တကယျ ဒိတျဒိတျကြဲတေ ယူခဲ့ရမှာ လို့အားမလိုအားမရ ပွောမိရငျ ဟဲ့ အဲ့အခြိနျက ညီးအဖကေ ဒိတျဒိတျကြဲ ပဲတဲ့
ဟုတျတော့လညျး ဟုတျသညျ အဖတေို့ညီကိုဟာ အသားရကေ ဖှေးရုံမက စိမျးပါနသေေးသညျတဲ့. .. မကျြခုံးတကေ ထူပိနျးနကော မကျြလုံးတှေ လှသညျ ညီကို ၂ယောကျ လုံးက ပွောငျးလာကာစကဆို ဒီမွို့သူတှေ အဲ့အိမျရှေ့ တဝဲဝဲ ပေါ့အတေဲ့ ပတျဆံကလဲရှိတော့ ငှတေော့ သုံးတာပေါ့တဲ့…. ငှကေိုသုံးရုံတငျမကပဲ ဖွုနျးပါဖွုနျးတာတှေ ဘာတှေ အဲ့ဒီအရှယျလေးနဲ့ အမသေုံးသပျတကျပုံမရ အမေ ရူးသှပျတဲ့ ကခွငျး အနုပညာ ကိုလဲ အဖရေဲ့ သဝနျတိုမူ့ အောကျမှာ စုံးစုံးမွုပျ ပြောကျ ကှယျသှားရတော့သညျ…
ကိုယျ သိတကျစအရှယျရောကျတော့ အမနေဲ့အဖေ ဆိုတာ တခါတရံသာ တှရေ့တဲ့ ဧညျ့သညျ တှေ ဖွဈနခေဲ့ပွီ….
တခါတလေ တော့ အမတေို့က မနျးလေးမှာ နကွေတာလို့ ကွားပွီး တခါတလတေော့ ပွငျအူးလှငျ မှာ နကွေတာလို့ ကွားဘူးသညျ အမတေို့ လာလညျမာ ဆိုတဲ့အခါ လဲ ကိုယျဟာ ထငျသလောကျ မပြျော
နငျတို့ကို နငျ့အဖတေို့နဲ့ ထညျ့လိုကျတော့မယျ လို့ အဒျေါတေ ခွိမျးခွောကျရငျ ဘာမှနျးမသိပဲ ကွောကျ ခဲ့ရသညျ… ကွညျ့စမျး သူ့အဖနေဲ့ တူလာတယျတော့ လို့ အဒျေါတစေရငျ ကိုယျတို့ မောငျနှမ တှေ အဒျေါတေ စိတျတိုငျးကြ စိတျဆိုးပွကွရတာပါပဲ… ။
အဖကေ အမအေိ့မျကို နောကျဆုံးခြိနျထိ ဝငျထှကျ ခှငျ့မရခဲ့ပါဘူး…. ယောကျြားနဲ့ အမတေ အကိုတေ ကွားလဲ အမဟော အမွဲလို စစေ့ပျရငျး ဗြာမြားနခေဲ့ရပါတယျ…
အဖေ နဲ့ ပွသနာတကျရငျ အမတှေ အကိုတှေ ကွညျကွညျမကွညျကွညျ ပွနျလာတကျပီး အဖလောချေါရငျ ဘသူတားတား ပျေါတငျတမြိုး ခိုးပွီးတမြိုး ပွနျလိုကျ သှားတကျသညျ… အဖေ က သှေးဆိုးသညျ… အရကျသောကျပွီး တကိုယျကောငျးဆနျတကျသညျ..
အလှနျသိတကျတဲ့ အရှယျရောကျလာတော့ ကိုယျဟာ အဖကေို့ မတှခေ့ငျြတော့ တကယျတော့ အဖကေ ကိုယျ့အထငျ အဆိုးကွီးထဲမပါပါ အရကျသောကျပွီး အမကေို့ အျောဟဈဆဲဆိုတကျ ပမေယျ့… ကိုယျ့ကို အကွီးဆုံးသမီး အနဝေေးတဲ့သမီးမို့လား မသိ တခါလေးမှ လသေံမာမာနဲ့ မပွော လကျနဲ့မရှယျခဲ့ပါ…
အဖဟော အလုပျတော့ တကယျလုပျပမေယျ့ မမွဲ စိတျဆတျလှနျးတာမို့ အလုပျတိုငျးမှာ ပွသနာတကျကာ ထှကျလာရတာကမြားသညျ အဖေ အလုပျပွောငျးတိုငျး အဖသှေားလရော အမဟော ဖဝါးထပျမြှပါစမွဲ တိုကျခနျးရရ တဲစုတျနနေေ ဖှယျဖှယျရာရာ ပွုစုသညျ ပှဲလမျးသဘငျမှာ အဖအေျောဟဈ ဆဲဆိုနလေဲ အမဟော အဖဘေ့ေးမှာ အဖေ ဘယျသူနဲ့ရနျဖွဈလို့ အဖမှေားမှား မှနျမှနျ အမဟော အဖဘေ့ေးမှာ အမဟော အဖကေို့ ကိုယျတို့ အရှယျရောကျတဲ့အခြိနျထိ ကိုကို ဟုသာ ချေါသညျ…။
(၂) ဘုရားစငျ ရှမှေ့ာ အဖနေဲ့ မတှပေ့ါရစနေဲ့ လို့ ဆုတောငျးဘူးပမေယျ့ အဖလော ရငျ တမငျပွုံးကာ ဖေ့ ဖနေဲ့ တီတာ တကျဲတဲ့ ကိုယျ ဟာ တနမှေ့ာ…
ရော့ ငါ့သမီးတှကျ တဲ့ ထမငျး ပနျးကနျထဲရောကျလဲာတဲ့ ဟငျးတုံးကို ဖကျခနဲ ဖယျပဈရငျး စားပှဲကထ ထှကျလာ တာက အဖေ့ အပျေါ ပထမဆုံးနဲ့ နောကျဆုံး ဆနျ့ကငျြ ရိုငျးစိုငျးဘူးခဲ့ခွငျးသာ……
အဖဟော တာဝနျမသိမူ့ တကိုယျကောငျးဆနျမူ့ အပွငျ ကိုယျတို့ မိသားစုအပျေါ လုံးလုံးခှငျ့လှတျလို့မရတဲ့ အမှား တခုကို လုပျခဲ့လပွေီ…… အငယျနှောငျး ဆီ အဖေ ရောကျနခြေိနျ တရှာထဲနေ အမဟော အငယျဆုံး ၂နှဈသားလေးကို ဖကျကာ ငိုရငျး အိပျနခေဲ့တယျ….. ဒါလဲ အမဟော ခှငျ့လှတျနိုငျဆဲ အမေ သူနဲ့ကှာမလား သမီးတို့နဲ့ ပွတျမလား လို့ ကိုယျဟာ ဘယျလိုနာကငျြမူ့နဲ့ မေးခဲ့မိလဲမသိ ကိုယျ့မေးခှနျးကွောငျ့ ပဲ လား အဖကေို့ နာကညျြး လှနျးသှားလို့လား ဒါမှ မဟုတျ ဝဋျကွှေးပဲ ကွခေဲ့လပေီလား မသိ ခုတော့ အဖဆေီ့က အမလှေတျမွောကျလာတာ ၁၅နှဈ ကြျောခဲ့ပါပွီ….။
(၃) ဝါသနာပါရာကို ငယျနုစဉျက စှနျ့လှတျခဲ့ပွီး အသကျ ၅၀ ကြျောမှ စတငျနိုငျခဲ့တဲ့ အမကေ ကဖို့ ဆိုခါးနာတာလဲ မသိ ပငျပနျးတာလဲမသိ အကနညျးပွ အဖွဈ သှကျလကျ နခေဲ့သညျ..။ တျောလှနျးတဲ့ အမပေ့ါရမီကို နှမြောတသ စှာ ဖွဈမိပမေယျ့ အမကေတော့ သူဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ နှဈ ပေါငျး ၃ဝကြျောကို နောငျတသံနဲ့ ဘယျသောအခါမှ မပွောခဲ့ပါဘူး တခါတရံ လသေငျ့လို့ အဖကွေ့ောငျးတှကွေားရတဲ့အခါ အမဟော ခပျဆိတျဆိတျသာ နတေယျ နောကျအိမျထောငျနဲ့ ကလေးနဲ့ လို့ကွားလဲ အမဟော မသိလိုကျမသိဘာသာ….
သပေီတဲ့ လို့ ကွားလဲ အမဟော မကွား သယောငျယောငျ …..
တရကျကတော့ မကျြမှနျတဝငျ့ဝငျ့နဲ့ ကိုယျ fb သုံးနရောသို့ ရောကျလာသညျ…..။
Fb မှာ နငျ့အ​ဖကေို ရှာကွညျ့ လို့ရသလား တဲ့ ကိုယျ မကျြစောငျးခဲ မှ ဟိုလိုလိုဒီလိုလို လြောခြ သှားတဲ့ အမဟော အဖကေို့ လှမျးနမေယျလို့ မတှေးမိခဲ့ပါ….
ဒီဖိတျစာ လေးကို အမဟော အဖကေို အပွီးစှနျ့လှတျ တော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျစဉျက စုတျဖွဲခဲ့သလား… အဖေ နောကျအိမျထောငျ ကသြှားပီးကလေးတောငျ ရနပေီ လို့ကွားစဉျကစုတျဖွဲ ခဲ့လသေလား…
ဖိတျစာအစုတျလေးကို ပွနျသိမျးထားတဲ့ အမဖေို့ကရော ပကျြစီးယိုငျနဲ့ခဲ့တဲ့ဘဝတခုရဲ့အမှတျတရ အဖွဈလား ယောကျြားအပျေါ လှမျးတဲ့ အလှမျးတှအေဖွဈလား တသကျမှာ တခါပဲ ဖွဈခဲ့တဲ့ အခဈြအတှကျလားတော့ အမပေဲ သိပါလိမျ့မညျ……… ။